I-Imatra Star Saimaa Villas 4 - I-Airbnb
I-Imatra Star Saimaa Villas 4
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguЭдуард
Ulwandle lunokufikelelwa kwimizuzu emi-3 nje. Ifumaneka kwi-Imatra, i-Imatra Star Saimaa Villas 4 isakhiwo esivela kwi-2004. Inika ukufikelela ngokuthe ngqo kwi-ski slopes, i-terrace, i-Wi-Fi yamahhala kunye nemibono yechibi. Le ndawo idume ngokutyibiliza, ukuloba nokuhamba intaba.
Eli gumbi linomoya-moya linendawo yomlilo, umatshini wokuhlamba, amagumbi amabini okulala, iTV enescreen esisicaba esinetshaneli zentambo, kunye nekhitshi elinomatshini wokuhlamba izitya kunye ne-oveni. Kukho i-barbecue kwi-terrace.
Iindwendwe zinokundwendwela i-sauna. I-Kylpyla SPA ikumgama weemitha ezili-100, apho kukho ipaki yamanzi enendawo ye-spa, i-bowling alley, indawo yokuzivocavoca, iindawo zokutyela ezi-4, i-buffet (isidlo sakusasa, isidlo sasemini, isidlo sangokuhlwa), iklabhu yeyacht, iindawo zebarbecue ezixhotyiswe ngokukodwa nokunye okuninzi. . ...
Ilinen yebhedi kunye neetawuli azifakwanga kwixabiso lokubhukisha, ungarenta okanye uzise eyakho.
Zonke izinto zangasese kunye nokucoca zibandakanyiwe kwixabiso lokubhukisha.
Umbuki zindwendwe ngu- Эдуард
Nanini na kwindawo, ekhoyo kwiViber, WhatsApp
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Imatra